Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tonga manerantany an-tserasera izao tontolo izao ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo
Moscow Seranam-piaramanidina Domodedovo Miezaka mampivelatra serivisy an-tserasera. Mpampiasa 35,000 isan'andro no mitsidika ny tranonkala ofisialiny. Ao amin'ny tranonkala, ny mpandeha dia afaka mividy tapakilan'ny fiaramanidina, mividy fiantohana ary mamandrika efitrano fandraisam-bahiny.
Ny seranam-piaramanidina dia nanangana serivisy an-tserasera mamela hamandrihana sy handoavam-bola ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny sy VIP any Domodedovo Moscow ary koa amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena 80 sy iraisam-pirenena 64 hafa.
Ity vahaolana ity dia novolavolaina niaraka tamin'ny masoivohon'ny Travelmart. Ny endri-javatra vaovao dia ahafahan'ny mpandeha manafatra serivisy haingana ary mandalo ny fombafomba alohan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alikaola.
Ny trano fialantsasatra ao amin'ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo dia malaza amin'ny mpandeha. Tamin'ny taona 2018, olona sahabo ho 600 000 no nitsidika ny efitranonay, fiakarana 12% isan-taona. Ny efitrano fandraharahana dia hita any amin'ny faritra fiainganana anatiny sy iraisam-pirenena. Misokatra manodidina ny famantaranandro ireo efitrano fatoriana ary azo alaina ho an'ny mpandeha rehetra na inona na inona sarany sarany. Ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo dia manasongadina serivisy isan-karazany ao amin'ny efitrano fandraharahana ao anatin'izany ny buffet ho anao rehetra, efitrano fiasana, Wi-Fi maimaim-poana, fahitalavitra ary haino aman-jery pirinty, efitrano fandriana. Ankoatr'izay, manolotra famindrana tsirairay amin'ny fiaramanidina ihany koa izahay.
Misy trano fatoriana folo ao amin'ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo. Ny seranam-piaramanidina dia mitantana tranokala fandraharahana dimy raha ny S7 sy ny seranam-piaramanidina Soisa, ary koa ny serivisy fiaramanidina UTG, no mitantana ny ambiny.
Tale jeneralin'ny Boeing: andraikitsika ny fiarovana ary manana izany isika